Comment it ! Vote it !
Clubnypian :: NYP Myanmar(Club NYPian) Thingyan :: NYPMM Extravaganza 2010 Share
2010 event is better than all
2010 event is as good as previous year
2010 event is the most popular
2010 event is the most problematic Nypain event
Subject: Comment it ! Vote it ! Thu Jan 21, 2010 12:48 am
Anything do you wanna say about NYPMM Extravaganza 2010 held on 16 Jan 2010.
Event Organizers များနဲ့NYP Radio က ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ... ပိတ်ကားမပါလို့set up လုပ်နေတုန်း မိးထွန်းလိုက်တာတို့ .
နိုင်ငံတော်အလံ ကို အရောင် ပြောင်းပြတာတို့ ...
လက်မှတ်မစစ်ပဲ နောက်ကျသူများကို အလကား ပွဲပြမိတာတို့ ...
montage မှာ နည်းနည်းလေး မစိုသလောက် ထစ်နေတာတို့ ...ပြီးမှ This is how we do it ဘွားခနဲ့ ပေါ်လာတို့ ...
NYP က အချောအလှလေးတွေ ကို အကုန်မသုံးပဲ အက သုံးခုလောက် ပဲ ထည့်ထားတာတို့ ...
ကျွန်တော် စရေးရမယ်ဆိုရင် Performers တွေက ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေထက် performance ပိုကောင်းတယ်...
ပွဲ တစ်ပွဲလုံးလည်း အဆင်ပြေပြေ ချောချောမောမောပဲ... ပြီးတော့ Organize လုပ်ထားတာလဲ အသေးအဖွဲ တိုလီမိုလီကလွဲလို့အကြီးကြီးတွေ အများကြီးကောင်း ပါတယ်...
နောက်နှစ်များမှာ လည်း သည့်ထက်မက ကောင်းမွန်အောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်.
Subject: Re: Comment it ! Vote it ! Thu Jan 21, 2010 8:08 pm
ဟုတ်ပ... တကယ်တော့...NYP မှာအချောအလှတွေအများကြီးရှိသေးတာကိုမြင်တွေ့ရပါတရ်... NYP 2010 extravaganzar ဟာအရမ်းကိုကောင်းတရ်... melody world ကတော်တော်ကိုကောင်းတရ်...အခြောက်လုပ်တဲ့သူတွေလဲအရမ်းမိုက်တရ်...
Subject: RE Sat Jan 23, 2010 12:06 am
One က အခြောက်လုပ်တဲ့ သူတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်လား။ အကူအညီလို ရင်ပြောကြည့်လေ. သူတို့ အပြင်မှာ လည်းခြောက်... ချင်မှာ ခြောက်မှာပါ...
Poll မှာ 2010 event is the most problematic Nypain event ကို Vote လုပ်တဲ့သူတစ်ယောက်ရှိတယ်... ဘာလို့အဲဒါကို Vote တာလဲ... ဘာကြောင့်ပါလဲ...ပြောပြလို့ ရတဲ့ ကိစ္စဆိုရင် အားလုံးကိုပြောပြပါလား... မပြောပြရင်တော့ ဒီကိစ္စမှာ Voter ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပတ်သတ်ရမယ်...
Subject: Re: Comment it ! Vote it ! Sun Jan 24, 2010 12:22 pm
စီနီယာ graduates တွေအနေနဲ့ ပွဲစီစဉ်နေချိန်အတောအတွင်းမှာ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ ပါဝင်ကူညီပတ်သက်ခြင်းမရှိဘဲ.. အခုလို ပွဲပြီးတဲ့အခါမှ ဘေးထိုင်ဘုပြောလုပ်ဖော်တော့ ရသေးတဲ့အတွက်၊
SP TP NP ကဲ့သို့ သူများကျောင်းများတွင် ထိုကဲ့သို့ graduates များမှာ ရိုက်သတ်လို့ပင် မကုန်နိုင်သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွင် လက်ဆယ်ချောင်းပြည့်အောင်ပင် ချိုးလိုက်ရမည်မဟုတ်၊
(သို့မဟုတ်) ကျွန်တော်တို့ graduates များမှာ နောက်လူများကို နေရာပေးချင်လွန်း၍လား၊ သူများတကာထက်ပင် အလုပ်ကို 24/7 လုပ်နေရသူများ ဖြစ်နေသရွေ့လား၊ အငယ်များကို ပုံပြင်ပြောပြရတာ ဝါသနာပါ၍သောကြောင့်လား၊ ပွဲနေ့တွင် မြန်မာလို ဝတ်ဆင်ပြီး ကျောင်းအနေဖြင့် ဧည့်ခံရမည်ကို ရှက်၍လား၊ ကြောက်၍လား။
organizer များမှ နွားကျောင်းသားဆန်သောမေးခွန်းများကို မဖြေကြားမီ.. စီနီယာ graduates များမှ အထက်ပါမေးခွန်းများကို မကွယ်မဝှက်တမ်း.. ဖြေကြားပါ။
Subject: Re: Comment it ! Vote it ! Sun Jan 24, 2010 8:26 pm
အင်း.. အဲဒီကိစ္စကို Graduates တွေကို မေးပေးမယ်လေ... Graduates အချီု့ လည်း ရွှေပွဲလာ ပရီတ်သတ်ကြီးကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလေး ဧည့်ခံပေးတယ်လေ။ Organizer ကြီးခင်ဗျား... အကောင်းမြင်တတ်ရင် အားလုံးက ကျေနပ်စရာကြီးပါ... အားလုံးက စိတ်က တော့ရှိတယ်... အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လက်ကာမပါနိုင်တာနေမှာပေါ့.
စကားကို နွားကျောင်းသားဆန်တယ်ထင်လည်း မဖြေပါနဲ့နွားလုံးဝမကျောင်းသော ကိုကို Organizer ခင်ဗျား..
Subject: Re: Comment it ! Vote it ! Sun Jan 24, 2010 11:17 pm
ဟုတ်ကဲ့.. Graduates အချို့ဆိုတာ ဘယ်လောက်များများပါလဲ.. ကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါ.. လက်ဆယ်ချောင်းထဲတော့ ဝင်သေးတယ်လို့.. အကောင်းမြင်တတ်လို့လဲ ပွဲကလုပ်လို့ပြီးခဲ့ပါပြီ... အကောင်းမမြင်တတ်ရင် အစကတည်းက ပွဲတောင်ဖြစ်လာမလား.. Admin စဉ်းစားပါ..
စိတ်ကတော့ မွေးကတည်းက ရှိကြပါတယ်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါဖြစ်နေကြသည့်အတွက် ဝမ်းနည်းမိပါတယ်... အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဆိုတာကတော့ သိပ်ပေါလွန်းပါတယ်.. ပွဲနေ့မလာနိုင်သည့်တိုင်၊ ကိုယ့်ကျောင်းဟဲ့ စိတ်ကလေးနဲ့ လက်မှတ်ကလေး (၅)စောင် (၁၀)စောင်ဆိုတာ ရောင်းမထွက်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်.. ဒီပွဲတင်မဟုတ်ဘူး.. ဘယ်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ဟာ စီနီယာတွေ ဝန်းရံဖို့အပိုင်းမှာ အများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်.. အဲလိုဆို တခြားအပြင်လူ၊ တခြားအပြင်ကျောင်းက လာနှောက်ယှက်မှာ စိုးရိမ်စရာမလိုဘူး။ အဲဒီပွဲနေ့ကလည်း ကျွန်တော်တို့မှာ မျှော်လိုက်ရတဲ့.. graduates တွေရဲ့ security အားတွေ။ ဖုတ်လေတဲ့ ငါးပိရှိတဲ့လို့တောင် ထင်ဖော်မရဘူး။
အဲဒါတွေကြောင့် ဒီလူလေး ၂ယောက် ၁ပိုင်းနဲ့ လုပ်နေရတဲ့ပွဲမှာ နိုင်ငံတော်အလံမပွင့်တာတို့၊ မီးမမှိတ်ခင်ထွက်လာတာတို့.. ဝေဖန်ချင်ဝေဖန်ပါ.. ဒါမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုလုပ်နေရလဲဆိုတာလေးကိုလည်း သိစေချင်လို့..
အက်ဒမင်ကတော့ သိပြီးသားဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်မှာပါ။
Subject: Re: Comment it ! Vote it ! Mon Jan 25, 2010 11:18 pm
သိတယ်လေ... ဘယ်သူက အပြစ်လို့ ပြောလို့ လဲ... ဝေဖန်တာကောင်းစေချင်လို့ ...
လူကြီးတွေ ပြောတာ မကြားဘူးဖူးလား... ဆူတာ ကောင်းစေချင်လို့ . ရိုက်တာချစ်လို့ တယ်...
Organizer ကြီးရယ် မလာတော့လဲ မလာဘူးလို့ မှတ်ပေါ့... လာတော့လဲလာတယ်ပေါ့... ဘယ်နှစ်မှာများ NYP Senior ပေါင်းစုံ လာတဲ့ပွဲရှိလို့ လဲ... ပွဲကျင်းပတဲ့ သူတွေရယ်... ကူညီချင်တဲ့သူ အချို့ ပဲလာတာပဲ... ဘာများဖြစ်လို့ လဲ...
Subject: Re: Comment it ! Vote it !
Clubnypian :: NYP Myanmar(Club NYPian) Thingyan :: NYPMM Extravaganza 2010